Ita app yeMexico ndiyo muteereri wekombiyuta wekutsvaga Windows 10. Kwemakore matanhatu apfuura, iyo Email mail yakaitika kuti ive imwe yeakanakisa email vatengi Windows 10. Iyo ine zvese zvaungatarisira mune yemahara email maneja.
The Windows 10 Mepu app inotsigira iyo inozivikanwa kwazvo yewebhu webmail service, pakati pevamwe. Kana iwe usingade kushandisa webhusaiti kutarisa uye kutsiva kune maemail eGmail, iwe unokwanisa kuwedzera yako Gmail account ku mail App.
Mubhuku iri, isu tinokuudza nzira yekuwedzera uye gadza yako yeakaunti yeGmail mune Windows 10 Email app.
Kuwedzera maGmail kuMail app mune Windows 10
Step 1: Chekutanga pane zvese, tanga iyo Email mail app. Kana iwe usati wedzera chero email account kune Email app, iwe uchaona yakagamuchirwa peji paunoda kubaya pane Wedzera account kuita.
Kana iwe wawedzera imwe kana mazhinji eemaakaunti ema imeji kuMext app nechekare, tinya pane gear / settings icon (iri nechezasi kuruboshwe) kuti uone iyo Zvirongwa pane. Dzvanya pane Manage account kuita.
Step 2: Zvadaro, chengetedza Wedzera account sarudzo yekuvhura iyo Wedzera account account. Skip nhanho iyi kana iwe wadzvanya pane Wedzera account account muChikamu 1.
Step 3: Pano, tora pane Google sarudzo. Kudzvanya pane Google icon kuchaunza peji nyowani reGoogle.
Step 4: Nyora yako kero yeakaunti yeGmail. Dzvanya pane Next bhatani.
Step 5: Isa password yako yeakaunti yeGmail usati wadzvanya iyo Next bhatani.
Step 6: Kana iwe wakakwanisa kuita nhambwe mbiri-mbiri yeakaunti yako yeGmail, iwe uchakumbirwa kuisa kodhi yekusimbisa.
Step 7: Pakupedzisira, chengetedza tendera bhatani uye wobva wadzvanya Done bhatani kuti utange kuwiriranisa yako Gmail account.
Step 8: Pane pane kuruboshwe pane iyo Email mail, yako email email kero inofanirwa kuoneka ikozvino. Dzvanya pairi kuti utarise yako inbox.
Pina zvese zvese mafolda eGmail kuruboshwe kuruboshwe
Nekugadzika kwekugadzirisa, iyo Meseji app hairatidze zvese mafolda pane pane kuruboshwe pane. Unogona kuwana chete Inbox riri kuruboshwe pane pane. Kuti utarise ese maforodha, unofanirwa kudzvanya iyo More sarudzo. Kuti uwedzere mamwe mafolda senge maDrafti, Spam, Sent Send, uye Trash kune yekuruboshwe pane:
Step 1: Mune iyo yekuruboshwe pane yeApple app, tinya paGmail account.
Step 2: Baya More batanidza kuti uone ese mafolda. Kungofa pane folda wobva wadzvanya Wedzera Favorites sarudzo yekuwedzera folda pane yekuruboshwe pane.
Ita Windows 10 Tumira download maemail ako ese
Nemasaiti eemail, Windows 10 Email ichaenderana nemaemail ako kubva mwedzi mitatu yadarika. Kumanikidza iyo Email app sync maemail ese:
Step 1: Pane kuruboshwe pane pepeji yeApp, kurudyi pane kero yeakaunti yeGmail uye wobva wadzvanya Zvigadziro zveAkwi kuita.
Step 2: Baya Chinja mailbox sync masystem kuita.
Step 3: Mu Dhawunirodha email kubva bhokisi rekudonha-pasi, sarudza Chero nguva kuyananisa maemail ese muaccount yako yeGmail. Iyo Email app inogona kutora nguva kutora pasi maemail ako ese.
Ita Windows 10 Email sync maimeri nekukurumidza
Windows 10 Email mail inogona kutarisa maemail matsva muaccount yako yeGmail kamwe mumaminitsi mashoma kuti uchengetedze bhatiri uye data. Kana iwe ukawana maimeri akati wandei pazuva uye uchida kumanikidza iyo Email kuti utore iwo sezvaunogamuchira ivo, hezvino izvo zvaunofanirwa kuita:
Step 1: Pane kuruboshwe pane pepeji yeApp, kurudyi pane kero yeGmail uye wobva wadzvanya Zvigadziro zveAkwi sarudzo yekuvhura iyo Akagadziridzwa dialog dialog.
Step 2: Pano, tora pane Chinja mailbox sync masystem sarudzo yekuona iripo Gmail sync marongero.
Step 3: Mu Dhawunirodha email itsva donhwe-pasi bhokisi, sarudza Sezvo zvinhu zvinosvika sarudzo. Ziva kuti iyi sarudzo inogona kushandisa bhatiri rakawanda sezvo iyo Email app ichiramba ichitarisa maemail nyowani mubhokisi rako reGmail.
Pina Gmail account kune yekutanga menyu
Iwe unogona kuda kuisa pini yeakaunti yeGmail kuMenyu yekutanga kuitira kuti iwe uwane kuona zvishoma nezvemaimeri ekupedzisira pasina kuvhura iyo Email mail. Heano maitiro ekuita izvozvo.
Step 1: Kungofa pane kero yeakaundi yeGmail mune yekuruboshwe uye wobva wadzvanya Pin kuti Kutanga.
Step 2: Dhonza mataira achangobva kuwedzerwa kumusoro kweMenu yekutanga kuti uone maemail matsva chero iwe paunovhura Kutanga. Kana tile yacho isiri kuratidza chero nhoroondo, tora-piya pairi, tinya Zvakawanda, wobva wadzvanya Turn live tile.
Delete Gmail kubva Windows 10 tsamba
Windows 10 haina kupa sarudzo yekubuda kunze kweiyo Email app. Pane kudaro, inokupa iwe kuti udzime yako email account kubva kune iyo Email mail app. Heano maitiro ekuita izvozvo.
Step 1: Vhura dialog yeAccounts dialog ka kurudyi pane iyo email email kero wobva wadzvanya Zvigadziro zveAkwi kuita.
Step 2: Click on Delete account / Delete account kubva pane ichi kifaa kuita.
Step 3: Paunowana iyo inotevera yekusimbisa dialog, tinya iyo Kudzima bhatani.
Nzira Yekushandura Nayo Akaunti yeGmail muChrome neGmail